Warranty momba ny kalitao 10 taona
76 Mametraka milina fanenomana Dornier
Loko sy loko 950 mahery
Raha misy Sunshine, dia misy Groupeve.
Lamba fandroana solon'ny solosaina malaza indrindra 5% ...
Jiro tsy mitongilana isan-karazany amin'ny jolon'ny safidy roller
Lamba mainty miaro amin'ny bakteria fanoherana ny bakteria ...
Volon'ondry Style Rainbow manaingo ny polyester lamba
Multi-Colored Double Layer manajamba lamba 100% ...
Volavola namboarina Shangri-La lamba jamba ...
Fampiasana ambony tahan'ny Zebra Shade Fabric 100% ...
SAMPEL FABRIKA MAIMAIMPOANA mihoatra ny 650 PATTERNS
Hahafeno ny filan'ny tsena isam-paritra
drafitry ny mpaninjara lamba
Lamba semi-mainty polyester
Lamba mainty polyester
Lamba mainty mainty
Groupeve dia orinasa mpamokatra lamba mamirapiratra mamorona masoandro mamorona endrika, R&D ary varotra. Izy io dia miaraka amin'ny Premium System, ilay orinasa malaza hatrizay.
Pikantsary sy varavarankely
Ny olona ao amin'ny birao dia maniry ny hanana tara-masoandro na dia eo am-baravarankely misy fomba fijery tsara indrindra aza, airflow, UV-protection, mahita ny varavarankely sy ny varavarankely azo avy amin'ny masoandro mba hihaona amin'ny zavatra ilainao, ny sunetex lamba vita amin'ny takelaka vita amin'ny masoandro vita amin'ny veromanitra mifangaro volo na kofehy polyester, izay no safidy tsara indrindra amin'ny tsenanao amin'ny fivarotana mivantana an'ny orinasa.
Sunetex Interior Solar Control Control
Groupeve dia manolotra lamba fampiasa amin'ny Sunscreen tsara indrindra ho an'ny varavarankely, varavarana ary blindness zipper ivelany, izay manome ny fandanjalanjan'ny hazavana, ny onjam-peo, ny fiononana ary ny hatsaran-tarehy, izay mahatonga azy ireo ho varavarankely mety tsara manarona ny toerana hipetrahana sy ara-barotra, miaraka amin'ny blinds roller , hahatsapa ianao fa afaka mifehy an'izao tontolo izao.
Ampitomboy ny fiainanao manokana amin'ny antoandro
Ny fitsaboana amin'ny varavarankely momba ny fiainana manokana no vahaolana tonga lafatra mba hampisy fiainana manokana amin'ny trano sy birao. Tadiavo ny lamba ambonimbony miaraka amina endrika vaovao, manolotra mihoatra ny 950pattern izahay ho an'ny fanangonana. Ampitomboy ny asa aman-draharaha ho an'ny varotra anatiny sy ivelany.
Ataovy mahazo aina kokoa ny tranonao
Raha te-hikaroka ny lamba fanamainty jiro 10 taona kalitaon'ny lamba avy any amin'ny orinasa China ianao dia ampitomboy ny varotra tsenan'ny fitsaboana ao an-trano. Ny lamba fifehezan'ny masoandro an'ny Sunetex dia mety indrindra amin'ny rindranasan'ny mpanjifanao sy ao an-trano misy vidiny mifaninana.
Fampirantiana Asia R + T Asia ...
Ry mpanjifa malala: Noho ny fihanaky ny valan'aretina pnemonia COVID-19 erak'izao tontolo izao sy mba ...
Zip Blinds no malaza indrindra any Azia atsimo, toa an'i Singapore, Malezia, Thailand, Indonesia, sns. Zip T ...
Ahoana ny fanovana ny lehilahyo ...
Ankehitriny ny trano manan-tsaina no rafitra malaza amin'ny fananganana trano, mihamaro ny olona te hanova ny ...
2020 Eo an-dàlana hatrany isika.